सानी ह्याभ ग्रेट किस डे - प्रभात खबर
सानी ह्याभ ग्रेट किस डे
प्रभात खबर १ फाल्गुन २०७७, शनिबार १६:२२ मा प्रकाशित
सुशील कन्दरा राजभर
इटहरी , फाल्गुन १
हटियालाईनकाे एक क्याफेमा बसिरेका थियाै,चर्चित हास्य गायक दाईहरुसंग । उनले कल गरिन , कहाँ हाे तपाई मैले ठाउँ नै भेट्न सकिन । उनलाई मैले लाेकेसनके बारेमा बताउदै गर्दा दाईले साेध्नु भयाे , भाइ बुहारी हाे कि क्या हाे निकै चहलपहल हेर्दैछु ।
मैले हासेर जावफ दिए । उनी अाईपुगिन,सबैलाई नमस्कार पनि गरिन । उनी छक्क परिन र विस्तारै साेधिन उहाँ त श्रीकृष्ण कमेडी गायक हैन ? मैले हाे भने । नमस्कार गरिन,हामीले चिया खाजा खायाै । उहाँले यी नानी काे हुन भनेर साेध्दा मैले मेराे प्रेमिका भने ,उनले अाखा तरेर हेरिन । अनि मेराे पाखुरा समाउदै भनिन , दादा हाम्राे बिहे पक्का भईसकेकाे छ। हेर्नुन उहाँले जहिल्यै प्रेमिका मात्रै भन्नू हुन्छ । अर्काे दाईले भाइ बुहारी लाई बुहारी भनेर मात्रै चिनाएस है भनेर भन्नू भयाे उनी निकै खुशी भईन ।
हामी पथरी जान निस्केका थियाै ,मन्दिप भाईकाे जन्मदिनको अवसरमा सानाे जन्माेत्सव थियाे । हामीलाई धेरै पटक अाउन अनुराेध भएकाले र उनलाई पनि जान ईच्छा भएकाले जाँदै थियाै । त्यहाबाट निस्के पछि बाटाे एक ठाउँ यस क्षेत्रमा नाम कहलिएका पत्रकारितामा ख्याती कमाएका विभिन्न व्यक्तित्वहरसंग भेट भयाे । कहेि दिन अगाडि फेसबुकमा हालिएको हाम्रो तस्बिरहरुले हाम्राे सम्बन्धका बारेमा राम्रै चर्चा बटुलेकाे थियाे । सबैले तपाईंहरुकाे जाेडि राम्राे हाेस भने , एक जनाले उठेरै हात मिलाउदै बधाई पनि दिए । त्यहि मध्य एक जनाले साेध्नुभयाे , तपाईंहरुकाे बिहे कहिले हुने ? हाम्राे टिकाटालाे भईसक्याछ दिदी, बैशाखमा बिहे गर्ने हाे अब भनिन । म केही बाेल्न सकिन । उनकाे ममिले बिहे मात्रै पक्का गर्नभएकाे हाे , मिति त थिएन । किनकि त्यस्ताे केही पक्का भएको थिएन । तर पनि म मुस्कान सहितकाे सहमति जनाईरहे । हामी त्यहाँबाट निस्केपछि पछि साेधे यसरी भन्नुहुन्न है, झुठाे सावित हाेईन्छ ।उनले हैन बाबा ममिले एकै पटक बिहा नै गरिदिने भन्नु भएको छ भनिन ।
हामी पथरी पुग्याै ,पथरीमा हामीलाई लिन भाइ अाफै अाए । हामीलाई नमस्कार गर्दै दाजुभाउजु दुबैलाई विशेष धन्यवाद । मलाई त दाजु अाउनुहुन्छ भन्ने लागेकै थिएन । पक्कै भाउजुले कर लाएर हाेला ,
हाे भाइ , अब मेराे कहाँ चल्ने हाे र , सब तिम्राे भाेउजु कै याेजना भनेर पन्छिए । हामीले राजमार्गको छेमा रेहकाे चटपटे पसलमा चटपटे खायाै , अरु साथिहरु पनि अाए । विशेष त प्रदेश २ का भाईहरु पनि अाएका थिए । सुस्मिता लगाएत माेरंगका नाम कहलिएका अभियान्ताहरुकाे जमघट भयाे । नगर उपप्रमुखकाे अागमन पछि जन्मदिनको केक काटियाे । हामीले रमाइलो गर्याै । हामी दुबै जना साकहारी भएकोले छुट्टै बसेर खाने व्यवस्था गरियाे । त्यति बेला सम्म हाम्राे बारेमा साेधीखाेजी भईसकेकाे थियाे । भाईले हाम्राे बिहे बैशाखमा पक्का भएको बताउदै विशिष्ट पाहुनाहरुसंग चिनजान गराए । उपप्रमुख दिदीले नवजाेडी हुनुहुदाे रहेछ,यहाँहरुलाई छुट्टै बस्ने व्यवस्था गर्न भन्नुभयो । हामी सबैले एकै ठाउँ बसेर रमाइलो गफगाफ गर्ने साेचेका थियाै, सुस्मिताले उनी संग केही बेर कुराकानी गरिन । उनले मेराे बारेमा सकारात्मक कुराहरु गरिन । दाईलाई हरेक कुरामा साथ दिनुहाेला, निकै काेमल मनका हुनुहुन्छ । धेरै संघर्ष पछि याे स्थान सम्म पुग्नुभएकाेले हजुर हातमा छ दाईकाे भविष्य भनिन , उनले पनि दाईकै कारण म अाज छु भनिन, उनले तपाई ढुक्क हुनु दिदी भन्दै बाचा गरिन ।
याे कुरा राति उनलेे मलाई सुनाईन । हामीलाई छुट्टै बस्ने व्यवस्था गरियाे जब कि हामीले मानेका थिएनौं , त्यस रात हामीले बिबाहकाे बारेमा मध्यरात सम्म कुरा गर्याै । उनलेे अाउने बैशाखमा नै बिहे गर्दा कस्ताे हाेला भनिन ।मैले म पहिला देखि नै फागुनमै गरम भनेकै हाेनि तिमी त पछि पछि भन्छाै । मैले बैशाखमा गर्नुपर्छ भने । तयारी त भईसक्या छ अब केही दिन पर्ख है त?
उनले सहमति स्वरुप मेराे निधारमा चुम्बन गरिन , अनि भनिन बाबा ह्याप्पी किस डे । सधै भरी संगै हुनाले मलाई याे याद नि थिएन कि अाज किस डे हाे भनेर । मैले पनि उहीँ तरिकाले फिर्ता गरे, केही बेर हामी चुपचाप एक अर्कालाई हेरिरयौ । के हेरेकाे बाबा? भनेर साेधिन ।अनि मैले भने, मेराे सुन्दर भविष्य हेर्दैछु सानी ,तिमीलाई विशेष धन्यवाद । अाफ्नाे मान्छेलाई कसैले धन्यवाद दिन्छन त ? म तपाईंको श्रीमती पाे हाे त, पिण्डेश्वरीमा सिन्दुर हाल्नुभएकाे याद छैन ? मैले उनलाई अंगालोमा हाले अनि भने साच्चै कति धेरै माया गर्छाै है मलाइ?
उनले छातिमा चिमाेट्दै भनिन खै भनेकाे त , के कुरा ?हेरन फेरि भन्दै थिईन याद अायाे । जाेडसंग कसे अनि निधारमा चुम्बन गर्दै भने सानी ह्याभ ग्रेट किस डे । अनि हामी पुनः एक भयाै ।
(लेखकको प्रेमभाव जस्ताको त्यस्तै कपि गरिएको )
२—१ गोल अन्तरले भरौल भेट्रानलाई पराजित गर्दै हाम्रो धरान भेट्रान फाइनलमा ट्रफी चुम्न सफल
जनता भेट्रान इटहरीलाई १—०को गोल अन्तरले पराजित गर्दै भरौल भेट्रानको फाइनलमा प्रवेश
आयोजक रातोलाई ट्राइ ब्रेकरमा ६—५को गोल अन्तरले पराजित गर्दै हाम्रो धरान फाइनलमा प्रवेश
एक्सनमा इटहरीका मेयर हेमकर्ण
तारा एअरको विमान दुर्घटना भएको स्थल पत्ता लगायो नेपाली सेनाले
जनता माविको पहलमा समग्र इटहरीको शैक्षिक योजना २०७९ बनाउने तयारी
धनकुटा जिल्लामा पहिलो पटक दलित वडाध्यक्ष पदमा निर्वाचित
इटहरीमा ४०५ को मतान्तरले अग्रता लिदै पौडेल
इटहरीको हालसम्मको मतगणना १२००: २३४ ले अग्रता लिदै नेपाली काङ्ग्रेस अगाडि
इटहरीमा शान्तिपूर्ण ढंगले मतदान सम्पन्न :१,०४,६२६ मतदाताहरु मध्ये ७३, ७३३ ले गरे मतदान
किराया साउदी अरबको केन्द्रिय अध्यक्षतामा चित्र कुमार
लोकतन्त्र हो कसैको माथि चाँहि दवाब डाल्न सकिन्दैन आग्रह गर्न सकिन्छ ः मंत्री यादव
९८०४३०३९१८ / ९८४२२४६१९२
प्रकाशक - प्रभात खबर प्रा.लि
सम्पादक - कृष्ण कला राई
©२०२० प्रभात खबर प्रा.लि सर्वाधिकार सुरक्षित
Designed by रोशन मैनाली